Putin oo hanjabaad culus u diray dalalka Yurub
Madaxweynaha Ruushka Vladmir Putin
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday dalalka shisheeyey ee ka iibsanaya gaaska inay ku gataan lacagta Ruusha ee Rubles, wixii ka dambeeya Jimacad\_ha maanta ah, hahdii kalena dalalka Yurub uu ka joojin doono sahyada gaaska.
Putin ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in dalalka Yurub ay akoonno ka furtaan bangiyada Ruushka oo lacagtiisa ay gaaska ku baddashaan.
Tallaabadan ayaa waxaa durbaba ka horyimid dalal badan oo qaaradda Yurub ah, iyadoo Jarmalku uu sheegay inay tahay mid ku xumeyn ah.
Go’aanka Putin ee Khamiistii ayaa dalalka Yurub ku kallifaya inay waayaan wax ka badan saddax meelood meel kamid ah gaaskii ay ku tiirsanaayeen, waxaana Jarmalka oo ah dalka sida aadka ah ugu tiirsan Gaaska Ruushka uu islamarkiiba howlgaliyay qorshe xaalad deg deg oo isugu dayayo inuu xaaladda ku maareeyo.
Dhoofinta Tamarta ayaa ah awoodda ugu badan ee Putin uu heysto, isagoo isku dayaya inuu arrinkan kaga jawaabo cunaqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen bangiyada, shirakadaha ganacsi iyo ururrada ku xiran dowladda Putin, taas looga falceliyay duullaanka uu ku qaaday Ukraine oo bishii labaad galay.
Tallaabadan ayuu Putin ku tilmaamay howgla milatari oo khaas ah.